eXamaYo - Libso Maqal Dhegaha, Kaamirooyinka iyo Daawashada Qishka ku Imtixaanka - eXamYo.com
WARBIXIN KU SAABSAN DHAMMAAN
Bilow inaad qorto si aad u aragto badeecada aad raadineyso.
Qalabka dhagaha dhagaha ee kamaradaha
Tiknoolajiyadda Spyware Ultimate Spy for Exam
Qalabka Dhagaha la Gashado, Kaamirooyinka, Qalabka Dhagaha Dhejiska leh Kaamirada & Jeegaanta
KHABIIR KU TAKHASUSAY ISBEDDELADA TIJAABOOYINKA
Qalabka Dhegaha ee Dhagaha la Gashado
Qalabka Dhegaha ee Dhagaha la Gashado ee Kaamirooyinka Wata
LACAG LA'AAN AH, OO KU SAABSAN INSURED! ;)
Dhammaan noocyada tijaabooyinka
Diyaar u ah in la oggolaado!
Suuragal ma ahan in la qabto
Android, macruufka, Windows...
Waxyaabaha Asalka ah
"Haddii aad ka daashay inaad lacag ku tuurto ping-pong tayo liidata iyo kamaradaha badhanka, waxaan kugula talinayaa xirmada eXamYo, 5 koorso ah oo la mid ah maalinta ugu horeysa"
Waxaan u baahanahay pinganillo si deg deg ah maxaa yeelay waxaan sameeyay imtixaan maalinta ku xigta waxaana uga mahadcelinaya adeegga cajiibka ah iyo xawaaraha eXamYo.com waxaan imanayaa wax ka yar 24 saacadood, waqtiga uun
"Waxaan moodayay in aan waligey dhaafi doonin imtixaanka wadista fikirka ... ilaa aan ka helo alaabada eXamYo oo aan ku aflaxo kii ugu horreeyay iyada oo aan wax guuldaro ah la kulmin"
"Waxaan sameeyaa shaqo saynis ah iyo pinganillos caadi ah ama garoogo igama aysan shaqeynin, laakiin waxaan helay eXamYo Watch chop watch waana kaliya waxa aan u baahanahay"
Maxaa dhacaya hadaan u baahdo hadda?
Waxaan leenahay shixnadaha ugu dhaqsaha badan iyo adeegga sidaa ku qaata amarradaada waqtigooda.
Ma i qaban kartaa
Maya, wax soo saarkeenna lama arag mana laga maqal bannaanka.
1. Qarso aaladda jirkaaga adigoo raacaya tilmaamaha isticmaalaha lagu soo daray.
2. Jawaab toos uga hel khiyaamada elektaroonigga ah.
3. Nuqul ka qaad imtixaanka, oggolaanshaha oo hilmaam inaad wax baratid =)
Ma ka heli karaa gurigayga dibeddiisa?
Haa, waxaad ka qaadan kartaa xirmadaada xafiisyada shirkada maraakiibta.
24 SAACADAHA DUGSIGA DHEXE ADDUUNKA
Gaadiid lacag la'aan ah Mar walba ku amar amarada
QIIMAHA HANTIDA IYO KUWA
Haddii aad u aragto inay ka jaban tahay, waxaan ku soo celin doonaa faraqa
WAXBARASHADA INTERNETKA 24 / 7
Waxaan ka jawaabeynaa su'aalahaaga 365 maalmo sannadkiiba
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, na weydii.
Waxaan si deg deg ah uga jawaabi doonnaa.
Waan aqbalay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Success! Waxaa laguugu daray liiska emailkeena.
© 2009-2020 - Waxaa awood u leh eXamYo.com ™